Football Khabar » ब्राजिलको टोलीमा नेइमारको स्थानमा विलियनलाई निम्ता !
ब्राजिलको टोलीमा नेइमारको स्थानमा विलियनलाई निम्ता !
ब्राजिलको टोलीमा चोटग्रस्त खेलाडी नेइमारको स्थानमा विलियनलाई डाकिएको छ । प्रशिक्षक टिटेले आफ्ना सुपरस्टार फरवार्ड नेइमारको स्थानमा इंग्लिस क्लब चेल्सीका विंगर तथा अट्याकिङ मिडफिल्डर विलियनलाई टोलीमा डाकेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार कोपा अमेरिका प्रतियोगितामा अब नेइमारको स्थान विलियनले लिनेछन् । नेइमार २ दिनअघि कतारसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेक्रममा घाइते भएका थिए । दायाँ खुट्टामा चोट बोकेका उनले आफ्नै भूमिमा हुने ठूलो प्रतियोगिता गुमाउने पक्का भएको छ ।
नेइमार टोलीबाहिर रहने पक्का भएको एकदिनपछि प्रशिक्षक टिटेले विलियनलाई टोलीमा डाकेका हुन् । ३० वर्षीय अनुभवी खेलाडी विलियनमाथि अब टिममा नेइमारको अभाव पूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व हुनेछ ।
भर्खरै सकिएको सिजनमा विलियनले चेल्सीका लागि कूल ५३ खेल खेल्दै ६ गोल गर्दा ६ गोलका लागि असिस्ट गरेका थिए ।
यसअघि टिटेले स्पेनिस रियल मड्रिडका युवा खेलाडी भिनिसियस जुनियरलाई बोलाउन सक्ने चर्चा थियो । त्यसैगरी, टोटनह्यामका लुकास मोउरा र युभेन्टसका डग्लस कोस्टाको नामसमेत चर्चामा थियो ।
तर, टिटेले यी सबै खेलाडी विकल्प हुँदाहुँदै पनि ३० वर्षीय विलियनलाई विश्वास गरे । कोपा अमेरिका जुन १४ बाट हुँदैछ ।
प्रकाशित मिति २४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:२२